PressReader - Isolezwe: 2019-01-14 - Ngikholwa wukuthi singaqeda nakwiTop 8: Nikola Kavazovic
Ngikholwa wukuthi singaqeda nakwiTop 8: Nikola Kavazovic
Isolezwe - 2019-01-14 - EZEMIDLALO - MTHOKOZISI MNCUSENI
UPHUPHA ngokuqeda kwiTop 8 umqeqeshi omusha weFree State Stars, uNikola Kavazovic, kodwa futhi uwuqonda kahle umsebenzi omhlalele ukuze aqale asuse iqembu engcupheni yokugencwa yizembe kwi-Absa Premiership.
UKavazovic, okobonakala sengathi uyayihlanganisa iFree State, uthe noma izembe kuyinto ebukeka sengathi isondelene nabo kodwa indlela iqembu lakhe elidlale ngayo libhekene namaqembu athathwa njengamakhulu nomphumela awuthole eHarry Gwala Stadium eshaya iMaritzburg United ngo 2-1 ngeledlule kumenze wakholwa wukuthi bangaqeda nakwiTop 8.
“Kuningi okungijabulisile ngalo mphumela njengokuthi la maphuzu siwathola eqenjini elisenkingeni efana ncamashi nale esikuyona okwamanje. Ngijabule kakhulu ngomphumela ngoba ngiyazi uzokwenzani ezinhliziyweni zabafana bami. Iqiniso lapha wukuthi lo mdlalo besiwuphethe wonke. Empeleni bekungaphela izinsuku ezintathu sidlala kodwa singalitholi igoli kodwa kwashintsha lokho.”
Ebuzwa ngokuba sengcupheni yezembe uthe: “Sizosuka kule ndawo. Okungiqinisa idolo wukuthi sibhekene neWits (Bidvest) esatshwayo sishayiwe kodwa siyihlule ngakho konke. Indaba isemagolini ngoba nakwiPirates (Orlando) izibalo zikhombisa ukuthi besingcono kunayo ngayo yonke into. IMaritzburg ibihamba phambili emdlalweni kodwa siyihlula ngakho konke. Konke lokhu kuyakhuthaza kimina ngoba kungitshela ukuthi le nto esiyizamayo iya ngokuya iyahlangana,” usho kanje uKavazovic.
Ngale wini iFree State isinamaphuzu awu-16 emidlalweni ewu-17.
NgokukaKavazovic, amaphuzu basazoqhubeka nokuwaqoqa emaqenjini athathwa njengamancane bese kuthi lawa ahlonishwayo bangabheki lutho kuwona kepha bacuphe uma kukhona ezifuna ukubapha kona izinkunzi zePremiership.
Emdlalweni olandelayo iFree State izobhekana neCape Town City eCape Town Stadium, eKapa, ngoLwesithathu ngo-7.30 ebusuku.